Somaliland: “Isagu Wuxu Gudoomiye Ku Yahay Xeerka UCID,Hadii Aanu U Hogaansamin Taa Macnaheedu Waxa Weeye Isaguna Gudoomiye Maaha”.Cali-Guray Oo Si Adag Uga Hadlay Warqad Shalay Gudoomiye Ka-Gudbiyay. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Isagu Wuxu Gudoomiye Ku Yahay Xeerka UCID,Hadii Aanu U Hogaansamin Taa...
BUUXINAYA INTAYSE XILKEEDU KU EGYAHAY.
Waxa sheegaya Q.26 Xeerka UCID waana sidan
d. Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Xisbiga.
2. Hadii aay timaado in hogaanka sare ee xisbiga xubin ama xubno ka mid ah aay lumiso xilkii aay xisbiga u haysay si waafaqsan xeerka, waxa awood u leh soo buuxinta xubinta banaanata Golaha Dhexe ee Xisbiga iyada oo cod 1/3 ku dooranayaan musharixiinta u tartanta jagada/jagooyinka banaanaatay.
3. Xubinta cusub ee buuxisa xilka banaanaday waxa aay xilka haynay inta laga gaadhayo shirwaynaha xisbiga ee caadiga ah.
Sharciga UCID wax madmadow ahi kuma jiraan. Is indh tirka Faysal xubin aan banaanaan marka Xeerka UCID la raacayo ayuu isagu indho adaygiisa iyo beentiisa iyo belaayadiisa isla soo taagay aniga ayaa magacaabay aniga ayaana xilkii ka qaaday aniga ayaan awood u leh oo xubin cusub magacaabi kara. Bal qodob keliya oo Xeerka UCID ah uu daliishanayo ha sheego haduu jiro ma jiro eh. Markaa saw maaha xoog iyo sharci darro ayaan isticmaalayaa? Isagu wuxu Gudoomiye ku yahay Xeerka UCID hadii aanu u hogaansamin taa macnaheedu waxa weeye isaguna Gudoomiye maaha